Azonao ambara amiko ve hoe aiza no hividianana rindran-damina tsara amin'ny tranokalako fizahan-tany?
Amin'izao fotoana izao, misy toerana maro samihafa izay hividianana rindran-dalana ho an'ny tranokalanao - manomboka amin'ny famoahana ny mpizara ary mampifandray ireo mpamatsy trano, mankany SEO na Digital Marketing agency. Mazava ho azy, raha omena ianao fa tsy afaka manangana tranokala momba ny fizahantany amin'ny tenanao manokana. Na izany aza, matetika ireo masoivoho sy orinasa toy izany, tsy hilaza ireo izay mahafantatra hoe aiza no hividianana rindem-boninkazo amin'ny vidiny mety, dia mety ho mahazatra be loatra. Midika izany fa ny tsy firaharahiana ny lohahevitry ny tranonkala, ary angamba ny sehatry ny fandraharahana an-tserasera, ny ankamaroan'izy ireo dia manandrana manapaka ny teti-bola vidiny amin'ny vidin'ny kalitaon'ny serivisy. Izany no antony maha-zava-dehibe ny mahafantatra hoe aiza no hividianana rindran-damina tena tsara, fa ny mahafantatra ny tadiny rehetra mba hahazoana ny tsara indrindra ho an'ny tranonkalan'ny fizahantany.
Miverena any amin'ny teboka, andeha hojerentsika izany - ny rindran-damba tsara dia tokony hofaritana ho rohy amin'ny tranonkala tena izy, mitondra pejy PageRank sy fahefana ambony, , fototra miorina amin'ny media sosialy, ary votoatin'ny pejy tsara. Raha ny marina, tsy hiady amin'ny rohy PBN isika, sa tsy izany? Amin'izany, etsy ambany dia hasehoko anao ny fomba hividianana rindran-damina mahazatra ho an'ny tranokalam-piarahamoninao amin'ny alalan'ny fomba telo samihafa - mikaroka loharano fitsangatsanganana miditra, manao hetsika an-tanana, ary manomboka blaogy an-tsesitany ao amin'ny blaogy lehibe indrindra.
Mitady loharano fitsangatsanganana midina
Voalohany sy amin'ny ankapobeny, manolotra fomba iray hitadiavana vohikala fitsangatsanganana midadasika aho, satria ny tontolon'ny fandehananareo dia ho nolavin'ny tranokala lehibe - tsy ho azo iainana izany mba hanaiky ny fandoavanao ho takalon'ny pejy fohy. Noho izany, manoro hevitra ny hikaroka loharano iray midadasika mifandraika amin'ny indostrian'ny fiaramanidina aho - amin'ny fampiasana ny fikarohana Google hahafantarana ny mombamomba ny fifandraisana mety, hahatakatra ny fepetra eo an-toerana sy ny fepetra eo an-toerana, miasa amin'ny fandefasana mailaka ireo "mangatsiaka", ary farany dia azonao atao ny mombamomba anao backlink ho setrin'izany. Raha izaho kosa dia nampiasa karazan-tsindrim-peo toy ity tranokala "site:" ity aho "izay manaraka ny teny fototra manan-danja. Azonao atao koa ny mikaroka "manoratra aminay" ary mitarika mivantana any amin'ny toerana mety.
Manao fihetsika an-tanana
Midika eto fa tokony hanaraka drafitra tsotra toy ity ianao. Voalohany, manomàna lisitr'ireo tranonkala izay heverinao ho sarobidy indrindra ho an'ny famoahana vahiny. Faharoa, fenoy ny fangatahana rehetra ary mandefa hafatra ho an'ny kandidà tsirairay. Fahatelo, tsy maintsy maka fotoana kely ianao mba hianatra sy hijery ny loharano tsirairay. Raha ny zava-drehetra, rehefa tonga any amin'ny sehatra ianao, aza misalasala maneho amim-pahasahiana - manome mpamaham-bolongana ny fanazavana marina momba ny ezakanao hahazoana backlinks SEO. Raha manao izany ianao, ny ankamaroan'ireo mpitoraka bilaogy dia hanome anao ny sarany vidiny - resaka momba ny raharaham-barotra, sa tsy izany?
Fanombohana ny blaogin'ny Guest ao amin'ny Travel Blogs
Andao hiatrika izany - indrisy fa tsy ny olon-drehetra no mpanoratra tsara. Na koa mety hahatsapa ny tsy fisian'ny fotoana handehanana ianao ary hanoratra votoatim-pahalalàna avo lenta momba ny bilaogy fitetezam-paritra sasany. Raha toa ka hitranga izany, ny hany vahaolana dia ny manangona tanana sasantsasany. Mazava ho azy, tsy maintsy mandoa izany ianao, fa ny fampiasana mpandraharaha matihanina manam-pahaizana manokana ihany dia afaka ho tonga famonjena marina ho an'ny lehilahy rehetra izay mbola mijery ny toerana hividianana rindran-kira tsara amin'ny bilaogy vahiny. Raha ny tena izy, ny fandoavana lahatsoratra lehibe sy ny fandefasana izany amin'ny blaogin'ny orinasa na loharano hafa liana amin'ny indostria dia midika fa saika efa vita avokoa ny zava-drehetra ho anao. Amin'izao fotoana izao, ny hany zavatra sisa tavela amin'ny fijerinao tsara dia ny fitadiavana ny tsara. Amin'izany, aza hadinonao ny miasa tsara amin'ny tontolon'ny endri-tsoratrao - tehirizo hatrany am-piandohana sy alohan'ny zavatra hafa Source . Mirary anao ho tsara vintana!